မလေးရှားနိုင်ငံ ရဲ့ ကုန်သွယ်မှု နဲ့ဆရာ”ဝီးကီး” (Wikipedia) နဲ့ စီအိုင်အေ CIA တို့ရဲ့အမြင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Business & Economics » မလေးရှားနိုင်ငံ ရဲ့ ကုန်သွယ်မှု နဲ့ဆရာ”ဝီးကီး” (Wikipedia) နဲ့ စီအိုင်အေ CIA တို့ရဲ့အမြင်
မလေးရှားနိုင်ငံ ရဲ့ ကုန်သွယ်မှု နဲ့ဆရာ”ဝီးကီး” (Wikipedia) နဲ့ စီအိုင်အေ CIA တို့ရဲ့အမြင်
Posted by Kyaemon on Nov 30, 2011 in Business & Economics, Education, Think Different |3comments
CIA Malaysia Trade Wikipedia
အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံ မလေးရှားရဲ့ ကုန်သွယ်မှု အကြောင်းကို ဆရာ”ဝီးကီး” အား မေးမြန်းရာတွင်သူ့ဆီက အောက်ပါ အချက်အလက် များကို ရရှိလာတာပါ၊ ဒိအပြင် စီအိုင်အေ CIA မှတ်တမ်းပါ နဲ့ အနည်းငယ် ကွဲပြားကွာခြားတာ ရှိလို့ သူက ယင်းမှတ်တမ်း မှ အချက်အလက် တွေကိုပါ လေ့လာဘို့ တပါတည်း အပိုထည့်ပေးလိုက်သေးတယ်၊
တင်ပို့ကုန် ဆိုရင် စင်ကာပူ Singapore သို့ ၁၃% ပတ်ဝန်း ကျင် နဲ့ အများဆုံးတင်ပို့ ဖြစ်ပြီး၊ ဒုတိယ လိုက်တာ က တရုပ်ကြီး ၊ ထက်ကြပ်မကွာပါဘဲ၊
အနောက်နိုင်ငံ ဆိုလို့ အမေရိကားဘဲရှိ ပြီး တဆယ် % ပတ်ဝန်းကျင်သာရှိတာ
အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံ နဲ့အခြား အာရှ နိုင်ငံတွေကို တင်ပို့နေတာက တော်တော်များများပါ
သွင်းကုန်ကျတော့ တရုပ်ကြီး နဲ့ဂျပန်တို့က မတိမ်းမယိမ်းဖြစ်ကြပြီး၊ ၁၃% ပတ်ဝန်းကျင် ကိုယ်စီ နဲ့ ထိပ်ကပြေးကြ တာ၊
အလားတူစွာ ဒီမှာလဲဘဲ အနောက်နိုင်ငံဆိုလို့အမေရိကားဘဲရှိ ပြီး တဆယ် % ပတ်ဝန်းကျင်သာရှိတာ၊
ဒါကြောင့် မလေးရှားနိုင်ငံ ချမ်းသာနေတာက အနောက်နိုင်ငံများနဲ့ကုန်သွယ် လို့ တဟုန်ထိုး တက်သွားတာမဟုတ်၊ အာရှနိုင်ငံတွေနဲ့ကုန်သွယ်လို့ဘဲ ဆိုနိုင် တယ်
အာရှနိုင်ငံ အချင်းချင်းကိုအထင်သေးပြီး နှိမ်တာ၊ အနောက်နိုင်ငံ တွေကိုမှ အထင်ကြီး ပြီး၊ မျက်နာလိုမျက်နာရ “ဖား” နေဘို့မလိုဘူးလို့မြင်ပါကြောင်း
ဆရာ”ဝီးကီး” Wiki ရဲ့ အချက်အလက် များ
စီအိုင်အေ CIA မှတ်တမ်းမှအချက်အလက်များ
Malaysia Economy 2011, CIA World Factbook
မလေးရှားရဲ့ဖေါ်မြူလာက တမျိုးတဘာသာပဲ ထင်တယ်။
1997 တုန်းက ငွေကြေးကစလို့ ပြဿနာတွေတက်တော့ IMF ကပြောတာတွေကို ပြောင်းပြန်လုပ်ရင်း တောင်ကျော်သွားနိုင်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
production နဲ့ပါတ်သက်ပြီး စဉ်းစားမိတာက
သူမသာ ကိုယ်မသာ ကိုယ့်အရပ်ထဲ ဘောင်ဝင်ဘို့က လက်တွေ့ ဖြစ်နိုင်ခြေများပါတယ်။
EU အီးယူ သဘောတူညီမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ မေးခွန်းတွေ မပြတ်လိုက်လံ နေ
ဥရောပခေါင်းဆောင်များက ယူရိုငွေစက်ကူ ရဲ့အပြစ်အနာစာတွေကိုပြုပြင်ဘို့ သဘောတူကြသော်လည်း အဓိကအရေးယူဆောင်ရွက်ချက်များ လိုအပ်နေ
Europe’s Leaders Agree to Repair Flaws in Currency, but Bold Strokes Missing
BRUSSELS – Europe’s leaders craftedanew “fiscal compact” to repair flaws in their currency union, but the deal lacked bold strokes investors have been urging and it could be insufficient to halt the region’s debt crisis.
The positive reactions appeared to be driven by relief that leaders had reached an agreement at all, rather than enthusiasm for the deal itself. If …
IMF က ဥရောပ နိုင်ငံများ သို့ချေးထားတဲ့ ချေးငွေများ ကြွေးဆုံးပျက်ကွက် သွားမှာကို အမေရိကန်ကစိုးရိမ်
WASHINGTON (Lesley Wroughton) – The prospect of European heavyweights like Italy or Spain turning to the IMF for rescue loans is worrying the United States and other nations that fear they could suffer losses on funds they have extended to the IMF.
Despite the International Monetary Fund’s stable record – no borrower has ever defaulted on an IMF loan and no country has ever lost money lending to the IMF – there are concerns about the IMF’s growing exposure to the euro zone.